Ihuku, iWayini, kunye neSinker #232 - I-Airbnb
Ihuku, iWayini, kunye neSinker #232
Iimboniselo zeZibuko eziphefumlayo
IHUKU, IWANINI, & NESINKER
Njengoko igama lisitsho, iHook, iWayini, kunye neSinker ziqhayisa ngamaxesha amnandi kunye neembono eziphefumlayo ukusuka kumhlaba ongaphambili oboniswe kwiveranda kunye nemigangatho emibini eyahlukileyo ukusuka kwigumbi ngalinye lokulala elaneleyo elibekwe kwindawo epholileyo yeVillas eHerons Landing. . Bukela izikhephe zikhukuliseka zingena kwaye ziphuma echwebeni okanye ubukele i-scape yomlambo ngelixa uphunga ikofu yakho kusasa okanye ukonwabela iglasi yewayini njengoko ilanga litshona.
Ikhitshi enkulu eqaqambileyo yegourmet ibandakanya izinto zokubala zegranite, izixhobo zentsimbi engatyiwa, imicrowave, kunye nezihlalo zetafile ezintandathu. Uya kufumana iikhabhathi ezigcwele zonke izixhobo ozidingayo ukuze wenze isidlo esithandekayo. Qiniseka ukuba uthatha imifanekiso emininzi kwiveranda yakho, ifanelekile i-Instagram! Unokupheka ngelixa ukonwabela ukuba kunye nosapho lwakho lonke olukungqongileyo. Kufutshane kwaye kuvuleleke ekhitshini yindawo yokuhlala etofotofo nenemibalabala enesofa, isitulo sokufunda kunye nomabonakude wescreen esicaba.
Amagumbi amabini okulala atsala ukuba ulale ngokuzolileyo kwigumbi eliphezulu ukuze ufumane ixesha elizolileyo okanye incoko. Ngazo zonke izinto onokuthi uzicele kwikhaya le-villa, iHook, iWayini, kunye neSinker iya kuba yindawo yokubaleka ongasoze uyilibale.
Kwakhona, ungalibali ukonwabela zonke izinto ezikufutshane kunye nezinto ezenziwayo ezibandakanya ukuqubha, ulwandle, imingxuma yomlilo, i-kayaking, i-kite ebhabhayo, ukukhwela intaba / ukuhamba, iindlela zokukhwela ibhayisekile, ibhiya yobuchwephesha kunye nokungcamla kwewayini, i-zip line, ukuntywila esibhakabhakeni, ukuvuthuza kweglasi, nokunye okuninzi, singasathethi ke ngolonwabo oya kuba nalo uhambahamba nje eZibukweni kwaye wonwabele ibha yetiki, ulwandle kunye nendawo yokutyela.